Ukuntula ukuxhaswa kungashabalalisa amaphupho kowejudo - Bayede News
Uhlose ukusiza intsha yasemakhaya okamasikandi
IJUDO ngumdlalo ongadumile futhi onganakiwe kwaboHlanga kodwa insizwa yaseMophelo, ngaseHammarsdale ibona izokwazi ukuxosha ngawo ikati eziko.
USmisokuhle Mntungwa unephupho lokuyomela iNingizimu Afrika emqhudelwaneni we-Olympics ozobanjelwa eTokyo ngowezi-2020. Le nsizwa eneminyaka yobudala engama-23, ithi yize inezifiso ezinkulu ngalo mdlalo owasungulwa eJapan ngowe-1964, kodwa ukuntula uxhaso nokunganakwa kwawo ngezinye zezingqinamba ezenza ishaye amakhala ngokukhetha iphela emasini nxa kuziwa ekuxhasweni kwezemidlalo kuleli.
UMntungwa uzomela iKwaZulu-Natal emqhudelwaneni obizwa ngeNational Rankings ozobanjelwa eFurther Market Convention Hall, ePort Elizabeth kusukela ngoMgqibelo usongwe ngawo. Lapha kusuke kuqhudelana ompetha bezifunda ngenhloso yokubheka ukuthi ngabe ubani ohamba phambili kuleli kulo mdlalo.
UMfo kaMntungwa efakana umlomo nelaboHlanga uthe yize ewuthanda lo mdlalo kodwa kwesinye isikhathi uke afise ukuwushiya phansi kwazise ubona engeke aye ndawo ngawo ngenxa yokuthi awunakiwe.
“Lo mdlalo ngawuqala ngoba ngiwuthanda futhi nginethemba lokuthi ngizoya kude ngawo, kodwa ngibuye ngicabange ukuwushiya phansi ngoba awunakiwe neze. Into ebuye ingigqugquzele i-Elite Athlete Development Programme okuyiyona engizicija ngaphansi kwayo engelekelelayo ekutheni ngizibone ngibalulekile,” kusho uMntungwa olwa esisindweni sama-73kg.
I-Elite ADP uhlelo oluzinze eMoses Mabhida Stadium lapho okuzicija khona labo abenza kahle emidlalweni eyehlukahlukene.
Ngokusho kukaMntungwa uma engathola uxhaso nokwesekwa angabanjwa kude. Uthe eminyakeni edlule ubehamba phambili ngokwezilinganiso kuJudo kuleli.
Uthi uya kulo mqhudelwano nje unyaka wonke ubezicija yedwa ngenxa yesimo senkece obekwenza angakwazi ukuzicija nabanye kulo mdlalo.
“Ngizimisele ukuthi ngiqhubeke ngibe ngohamba phambili kuleli, ngiyafisa ukuthi nginqobe ePort Elizabeth. Nokho kubukeka kuzoba lukhuni satshe njengoba ngizicija ngedwa. Lapho engizicija khona kubuqamama nasesikoleni kumele ngigibele, imali ayikho isona sizathu esenza ukuthi ngizilolonge ngedwa,” kuzikhalela uMntungwa.
Ukhale ngomqeqeshi wakhe uRoby Jordaan ukuthi akayifaki incwadi kubantu abathintekayo abangamnika uxhaso.
“Kwesinye isikhathi ngibona ngidayiswa umqeqeshi wami uRoby Jordaan okunguyena okumele ngabe uyangikhangisa kubantu ukuze bezolula isandla. Ngiyafisa ukudlala imiqhudelwano emikhulu okungaba ama-Olympics,” kusho uMntungwa.
Nanyakenye leli qhawe likwazile ukuthi liye kweminye imiqhudelwano njenge-University Sport South Africa (USSA) owawubanjelwe e-Univesity of Pretoria, wakwazi ukuthi aphume endaweni yesi-5 eqhudelana nezinye izinsizwa ezili-16.
Ngonyaka wezi-2016 wanqoba izindondo zegolide ezimbili emqhudelwaneni obizwa ngeCommonwealth Judo Championship eyayibanjelwe ePort Elizabeth.
UMntungwa wenza unyaka wesithathu wezifundo zeLaw and Politics eNyuvesi yaKwaZulu-Natal.
Bayede News Feb 12, 2018